ABDII HINKUTATIIN/Never give up!!-Gorsaafi Beekumsa Xiinsammuu kan nama Hundaaf ta’u! Beekan Gulummaa Irranaa’tiin bara 2017 – Beekan Guluma Erena
ABDII HINKUTATIIN/Never give up!!-Gorsaafi Beekumsa Xiinsammuu kan nama Hundaaf ta’u! Beekan Gulummaa Irranaa’tiin bara 2017	Beekan Erena
Books, Education, General Category, Personal Category January 6, 2017January 28, 2017OROMO ISSUES
Abdii Hinkutatiin/Never give up!
Addunyaan irra jiraannu kun addunyaa wal’aansooti. Injifachuufi injifatamuun walcinaa adeemti. Carraanis akkasuma. Takka ol nama baasti; takkammoo gadi nama buusti. Namoonni mul’ata isaanii bira dafanii kan hingeenyeef sababa dafanii abdii kutataniifidha. Jireenya keessatti yeroon gara milkiitti ittiin tarkaanfatan yeroo qormaanni namatti heddumatudha. Jireenyi qormaataan guutuudha. Akkuma mana barumsaatti namni qormaata qoramee qabxii gaarii galmeesse badhaasa guddaafi ramaddii guddaa argatu; dhaalli namaa qormaata keessa darbee galma gahinsa mul’atasaa bira dafee gaha. Biyya lafaa kanarratti namoonni maqaan isaanii yeroo mara faarfamaa jiraatan warra utuu abdii hinkutiin jabaatani hojjetanidha. Fakkeenyaaf, Thomas Edison’ lammii biyya Amarikaa kan humna ifaa, har’a dinagdeefi wantoota hedduu itti argaa jirru kana kalaqedha. Steve Jobs’ kan jedhamu nama meeshaalee amma namni hedduu itti gargaaramaa jiru kan ‘Apple’ jedhamu kalaquun addunyaa kana ajaa’ibsiisedha. Bil Gates’ nama ‘maayikiroosoftword’ jedhamu uumee yeroo ammaa kana sooressa beekamaa biyya lafaa kanaa keessaa tokko ta’edha. Benjamin Franklin’ kan jedhamus nama siyaasaan beekamaa, barreessaafi dhimmoota ifaafi humna elektiisiistiitiin beekamti qabu ture. Dubartiin beekamtuun ‘Marie Curie’ jedhamtu bara 1903 badhaasa addunyaa beekamaa kan argatteefi elementoota mataasheeti nama argattedha. Galalileo Galilei nama biyya Xaaliyaaniiti. Innis nama ‘abbaa saayinsii ammayyaa’kanaa jedhamuun beekamudha. Hayyoonni hojii isaaniitiin biyya lafaa kana ajaa’ibsiisan hedduutu turan. Dhimmi guddaan hayyoota kana walfakkeessu abdii kutannaa tokko malee mul’ataafi abjuu dhalootaaf qaban sanatti cichuusaaniiti.
Beekan Gulummaa Irranaa-University of Massachusetts Boston
Email address: beekanguluma@gmail.com
← Personal Ambition the source of our weakness, part 1 and 2 By Rundassa Asheetee Hundee
GAAXEXEESSAA DAANI’EEL AREERIIFI RAAJII GUDDATAA DHIMMA OGUMMAA GAAZEXESSAARRATTI DUBBATAN →